निर्मला हत्या प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो के भने जस्ले अधिकारकर्मीले पत्रकार सम्मेलन गरेर भने, ‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ’ (भिडियो) – Etajakhabar
निर्मला हत्या प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो के भने जस्ले अधिकारकर्मीले पत्रकार सम्मेलन गरेर भने, ‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ’ (भिडियो)
महिला अधिकारकर्मी शारदा चन्दले निर्मला पन्तको वास्तविक हत्यारालाई पत्ता लगाई कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने बताउँदै आफूहरु न्याय माग्न काठमाडौं आएको बताईन् ।
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भनिन्,‘न्याय माग्न काठमाडौं आएका छौं । तर, हामी जहाँ–जहाँ जान्छौं, त्यहाँ–त्यहाँ हाम्रो पछि प्रहरीको सिआईडी छरिएका छन् । प्रहरीहरु त हत्या भएको ठाउँमा जानुपर्ने होईन र ? सरकारले निर्मलाको हत्यारा पत्ता नलगाउनु दुःखद् हो । राष्ट्रपति यो घट्नामा किन मौन बस्नुभएको छ ? नारीको अस्मितामाथि यत्रो प्रश्न उठ्दा पनि राष्ट्रपति किन मौन बस्नुभएको हो ? एक वर्षमा कञ्चनपुरमा २७ जना चेलीहरुको ईज्जत लुटिएको छ । तर राष्ट्रपतिज्यूले निर्मला पन्तको हत्याबारे किन बुझेरपनि बुझपचाउनुभयो ? तपाईलाई के बाध्यता भयो ?’
प्रकाशित मिति: बिहिबार, भाद्र २८, २०७५ समय: २२:१२:४७